छेपाराहरू र प्याज छोडाउने संस्कृति | मझेरी डट कम
kbs — Sat, 05/30/2009 - 21:44
करिब वर्ष दिनअघि परिचित भएपनि बेलाबेलाको भेटघाटमा सामानय कुराकानी बाहेक यति नजिक उनीसँग हुने मौका पाएको थिइन । मित्र-मित्रबीचको जुँगे लडाइँमा उनको उपस्थितिले मेरो उनीसँगको भेटघाट अलि बाक्लियो । उनका ओजपूर्ण कुराहरू सांसारिक विचित्रताका चित्रहरूको प्रस्ट्याइँमा उनको स्पष्टता, कलियुगीन सुखसयलका खातिर ननिहुरिने स्वाभिमान, बहुरूपि छेपारे प्रवृत्तिका नाड्ढा मान्छेहरूको पहिचान गर्नसक्ने क्षमता मेरा निम्ति प्रौढ शिक्षा सावित भयो । त्यसैले होला सामीप्य बढ्दै गयो । आज पनि सँगै थिएँ, उनीसँग रहँदाको क्षणमा थोरै कुरा सिक्दासिक्दै समयका अगाडि हार्दै हामी छुट्टयिौँ । आ-आफ्नो बाटो लाग्नुअघि उनले गरेका कुराहरूले म गम्भीर भएको देखेर होला "धत् तिमी त भावुक रहेछौ" यतिभन्दै आफ्नो बाहुआगडि बढाएँ ।
लेख्दै कोर्दै गरेको यो कागजको पाना मेरो निम्ति उनी झैँ प्रेरणा बन्न सक्तछ । रात धेरै छिपिए तापनि थकान महशुस छैन लक्ष मात्र सामुन्ने भएकोले निन्द्रा हराउनुको कारण उनी नै हो भन्ने पत्तो लागिसेेकेको छ तर त्यो निरर्थक निन्द्रा हराएर मेरो निम्ति सार्थक पाठ सिकाएको छ । उनीसँग आज छुट्ने बेलाको घटनाले नै वास्तवमा मलाई झस्कायो । असल लोग्ने त उनी पक्कै हुन् साथै जिम्मेवार पिता पनि तर म किन बन्न सकिन ? । उनी त एउटा खुल्ला पुस्तक हुन् यसका हरेक अक्षरहरू चिन्नेहरूका लागि पाठ बन्न सक्तछन् तर म किन पुस्तक बन्न सकिन ? सायद यही नै विविधताभित्रको एकता हुन सक्तछ । हो अभावले मान्छेको स्वाभिमानलाई मार्दछ तर तिमीले त त्यो पुस्ता गुजारिसकेका छौ, यसर्थ त्यो स्वाभिमान सर्वथा झुक्न नदेऊ । प्राप्त अवसरलाई अर्काको खाँचो टार्ने दयाभावलाई मर्न नदेऊ । तिम्रो दर्शन र उपदेशका भोकाहरूलाई खुराक दिइराख । यो युग समयअनुसार छोपारोले रड्ढ फेरे झैँ बाँच्न नजान्नेहरूका लागि हैन । मेरा यी कुराहरूसँग उनको आसमझदारी रहृयो भने उनीबाट आज उपरान्त पाठ सिक्ने मौका नपाउला... । के भयो र गत हप्ता अघिका दिनहरू केवल मृत्युको प्रतिक्षा गर्न प्रर्याप्त थिएनन र ?
जे होस् मेरो हप्तादेखि हराएको निन्द्राको जडसम्म पुग्न सफल भए तापनि मेरो अन्तरहृदयबाट एउटा कौतुहलता हराउन सकेन । मृत्युको पर्खाइको यो यात्रामा मान्छे त मैले अनगिन्ति भेटेँ हुँला तर किन उनकै कुराबाट म प्रभावित भएँ ? न उनको घर थाहा छ ? न परिवारसँग मेरेा निकटता छ ? आखिर को हुन् उनी... ? बिहानी नजिकिँदै गरेको सङ्केत बाहिरबाट चराचुरुड्ढीले दिन थालेकोले मैले धेरै चिन्तन गर्न असमर्थ रहेँ र निस्कर्ष निकाली हालेँ । यस दुनियाँका लागि जोसुकै होस् ऊ तर मेरा निम्ति आदरणीय मेरो दाइ हो । उलिाई सबैले "दाइ" भन्छन् तर खास भाइ भएर ऊजस्तै भावी पुस्ताको "दाइ" बन्नेछु ।
अतिथि — Wed, 01/13/2010 - 15:28
सप्तरीको भूमिबाट दक्षिणेभक्त सरखारलाई खुल्ला पत्र